Nhau - UUGreenPower Inoburitsa Ina Supercharging Mhinduro
UUGreenPower Inoburitsa Ina Supercharging Mhinduro
UUGreenPower Inoburitsa Ina Supercharging Mhinduro!
Core muromo: musi August 26, rechi14 Shanghai International kuchaja zvivako indasitiri inoratidzirwa rakaitirwa Shanghai New International Expo Center. In ichi kuratidza, vanoverengeka mudzimba uye vatorwa nyeredzi emakambani kusanganisira akangwara kuchaja mhinduro, inotsigira zvivakwa mhinduro, yepamusoro kubhadharisa tekinoroji, akangwara kupaka system, mota magetsi, "photovoltaic", simba rekuchengetedza system, nezvimwe.
Kuti tigadzirise iri kuwedzera dambudziko remagetsi uye matambudziko ezvakatipoteredza, shanduko huru dzaitika muindasitiri yemotokari yepasi. Magetsi matsva emagetsi ave iwo maitiro makuru ekuvandudza nyika dzakasiyana siyana, uye marongero eetekinoroji kutsvagisa nekusimudzira uye maitiro eindasitiri anogara achisimudzirwa. Muna Zvita 2018, yenyika yekuvandudza uye Reform Commission, yenyika simba manejimendi, Bazi reindasitiri uye ruzivo rwetekinoroji pamwe nebazi rezveMari zvakabatana zvakapa "chiziviso pachirongwa chekuita chekuvandudza kuchaja rutsigiro kugona kwemagetsi emagetsi matsva", ayo zvinonyatsodiwa "kukurumidza kutsvagisa nekushandisa kwe-yepamusoro-simba kuchaja tekinoroji", "kuumba hunyanzvi matanho ekuchaja-simba emagetsi emabhazi emagetsi, uye kuita kutsvagisa nekusimudzira tekinoroji yepamusoro-simba yemotokari dzevanofamba uye zvakajairwa pre-yambiro Kutsvagisa basa ". Muna Chikunguru 2020, State Grid Corporation yeChina, pamwe neChina Power Grid Corporation, chademo protocol Association yeJapan neTokyo Electric Power Co, Ltd., vakabatana vakaburitsa gwaro jena paChaji conduction yekuchaja tekinoroji yemotokari dzemagetsi, iyo inoratidza zvakare chizvarwa chitsva chechaji tekinoroji inofamba ichienda kune nhanho nyowani yekuumbwa kwakawanda uye kushandiswa kwemaindasitiri, uye kuchaja-kwesimba-kukuru kunozivikanwa nevazhinji varapi vemaindasitiri.
Zvinotoshamisa kuti, pakuratidzira uku, Shenzhen UUGreenPower Electric Co, Ltd. (inozodaidzwa kunzi UUGreenPower), mutungamiri weEV akangwara kuchaja uye kuburitsa mhinduro, akaendesa kumberi kwaro kutungamira muhunyanzvi hwekugadzira zvinhu, uye ndokutanga mana makuru ekuchaja mhinduro senge , pamwe neUBC 75010 bidirectional V2G yekuchaja murwi, iyo inogona kusangana nezviitiko zvakakura zvekushandisa zveV2G mune ramangwana, kumisikidza mafungu ekupedzisira.
Sekureva kweChina kuchaja murwi network, UUGreenPower yakaenderera ichitanga huwandu hwekuchaja module chigadzirwa nhepfenyuro neayo yakasimba R & D timu uye makore etekinoroji kuunganidzwa mumunda wekushandura kwesimba, uye yakachengetedza nzvimbo yayo inotungamira muhunyanzvi muindasitiri kune nguva refu. Muchiratidziro chekupedzisira, iyo IP65 yakakwira yekudzivirira yekuchaja module, iyo yakatanga kuburitswa muindasitiri kuburikidza nekuzvimiririra hunyanzvi, yakabairira pfuti paruoko kuenda kunongedzo yekuvandudza yekuvimbika kwakanyanya uye kwakanyanya kuwanika kweiyo indasitiri yekuchaja.
Muchiratidziro chegore rino, zvigadzirwa zvitsva zvakasiyana siyana zvakatangwa neUUGreenPower zvakakwezva vanhu vazhinji kubva mumaindasitiri kuti vaone uye nhepfenyuro yenhau kukwikwidza kufukidzwa. China ichichaja murwi network zvakare yakanyatso bvunzurudza Bo Jianguo, maneja mukuru weUUGreenPower, uyo nemoyo murefu akaunza zvigadzirwa zvitsva kwatiri.
Mane maneja ekuchaja mhinduro
40kW super simba inokurumidza kuchaja mhinduro
Sekureva kwaBai Jianguo, maneja mukuru weUUGreenPower, UUGreenPower inoenderera mberi nechinzvimbo chayo chinotungamira mumunda wehunyanzvi-hwekuchaja tekinoroji. Iine tekinoroji yemagetsi ichangoburwa uye tekinoroji yekupisa kupisa, iyo 40kW super simba yekuchaja module inochengeta saizi imwechete uye interface neiyo 30kW module. Mukugadzirwa kwemurwi wese, nzvimbo nemutengo wedutu rese zvinochengetwa. Kuwanda kwesimba kwemurwi wese kunowedzerwa ne30%, uye mutengo weyuniti pawatt inoderedzwa ne10%.
Wokutanga mupi muindasitiri kusimudzira saizi yakafanana, yakakwira simba ye40kW yekuchaja module, masimba kuwanda kusvika ku60W / mukati3, inotungamira iyo yekuma indasitiri.
Matatu nhanho Vienna PFC topology, ina LLC inopindirana yakafanana topology, magineti akabatanidzwa ekubatanidza tekinoroji, chaiyo digitaalinen yekudzora algorithm, yakanakisa thermal dhizaini dhizaini
Chinja nzira yekuvandudza yesimba rakakwira uye nekuchaja nekukurumidza muindasitiri
Iko kuwanda kwesimba kwemurwi wese kunowedzerwa ne30%, uye iwo mutengo wemutengo mutengo pawatt inoderedzwa ne10%
IP65 kudzivirirwa kwakakwirira nekukurumidza kuchaja mhinduro
Nhengo yepakati yemurwi wekuchaja ndiyo module yekuchaja. Kuvimbika uye kugadzikana kwekuita kwayo ndiyo kiyi yekuvimbika kwenzira yekuchaja poindi. Nekuwedzera nekukurumidza kwenhamba yemapombi ekuchaja akaiswa muChina, mutsauko weicho chaicho mashandiro mashandiro ekuchaja ma module anoratidzwa zvishoma nezvishoma. Mumakore achangopfuura, iyo yekukundikana mwero wekuchaja module rave iri dambudziko rakakosha kukanganisa kuwanikwa kwechaji poindi system.
Zvinoenderana nekuongororwa kwehunyanzvi vemaindasitiri, kuchaja mirwi kunowanzoiswa panze munzvimbo ine guruva, yakanyanya-tembiricha uye inonaya yakafumuka nharaunda. Kunyangwe iro giredhi rekuchengetedza remapepa ekuchaja kazhinji IP54, dhizaini yekuchaja module inowanzo kuve IP20 kuburikidza nemhepo dhizaini. Guruva, mhute yemunyu, kunaya kwemvura inonaya munharaunda zvakatombopinda mune module, zvobva zvanganisa hupenyu hwebasa. Naizvozvo, kugadzirisa zvachose dambudziko iri, kugadzirisa kuchengetedza kwenzvimbo yekuchaja module ichave iri kiyi.
Mune chiratidziro ichi, UUGreenPower yakaratidza iyo yakakwidziridzwa vhezheni 2.0 yeiyo IP65 yepamusoro yekudzivirira module. Mushure mekupfuura kwegore rimwe kuomarara kwekuongorora kwezvakatipoteredza, vhezheni itsva yemo module inogona kuiswa pamusika pamwero mukuru munguva pfupi. Iyo IP65 yakakwira dziviriro module inotora iyo yakasarudzika yakasarudzika yemhepo duct kupisa dissipation tekinoroji, uye kuvimbika kwesisitimu kuri nani kwazvo. Hupenyu hwese hwekutenderera TCO yechaji murwi system inogona kuponeswa neinosvika mazana mana mazana emazana RMB ichienzaniswa neIP20 module mumakore gumi.
Iyo inokodzera yakaoma yekushandisa nharaunda senge jecha guruva, munyu mhute uye condensation
Module kuvimbika kunovandudzwa, kugadzirisa kwemahara kwemakore mashanu, uye yegore yekugadzirisa mutengo inochengetwa nezve 3000 RMB / gore
Yese yekuchaja murwi inokwidziridzwa kuIP65 isina mvura dhizaini yekuchaja module, iyo inochengetedza mutengo
Iyo murwi wekuchaja haudi AC inosangana, guruva-chiratidzo donje, pedza fan, ichiponesa nezve 3000 RMB / kabati
Kutora iyo 120kw murwi mumwe semuenzaniso, iyo TCO chengeto yemakore mashanu nemakore gumi ingangoita 10000 RMB uye 40000 RMB zvichiteerana.
30kW yakakwira inochinjika nekukurumidza yekuchaja mhinduro
Bo Jianguo, maneja mukuru weUUGreenPower, akaunzawo chimwe chigadzirwa chenyeredzi, akateedzana 30kW yekuchaja module ine akawanda maratidziro ezviitiko zvakasiyana. Sekureva kwaVaBai, module iyi inogona kusangana nezvinodiwa nekukurumidza zvekuchaja zviteshi zvechaji muzviitiko zvakasiyana uye kubatsira vatengi kuona yakanakisa sisitimu yekushandisa. Semuenzaniso, 750V / 40A yebhazi yekuchaja chiteshi, 1000V / 30A yekushandisa mota yekuchaja chiteshi uye 500V / 60A yesimba rekutsinhana chiteshi. Uye zvakare, kune yemunyu pfapfaidzo condensation nharaunda, kune guruu yekuzadza specification (f) module uye European specification (b) module yemusika weEuropean.
Inotungamira chikamu chemusika che30kW yakakura simba yekuchaja module
Zvinyorwa zvakasiyana zviripo. 750V / 40a, 1000V / 30A uye 500V / 60A inokodzera zviitiko zvakasiyana zvekuchaja, senge bhazi yekuchaja chiteshi, yemagariro mashandiro emotokari yekuchaja chiteshi uye chiteshi chemagetsi
Yakazara yekuzadza maratidziro (f) inosarudzika, inokodzera kwakakomba kunyorera zvikumbiro
European Standard Rondedzero (b) sarudzo, inokodzera yeEuropean standard charge chiteshi
Zvinoenderana nezviitiko zvakasiyana, sarudza iwo akakodzera maratidziro kuti uwane iyo yakanakisa kunyorera chikumbiro chirongwa
Inikungwara kuongorora of EV kuchaja mhinduro
Panguva imwecheteyo, kuitira kuzadzikisa zvinowirirana zvekuwaniswa zvinodiwa zvemuchina mumwe nepfuti nhatu dzinodiwa nemhiri kwemakungwa kweEuropean standard kuchaja murwi, UUGreenPower yakanyatso kuvhura umev04 yekuchaja murwi wekutarisa module pane ino kuratidzwa. Imwe yekutarisa unit inogona kuenderana neEuropean standard, yeJapan standard uye yeNational standard yekutarisa maprotocol. Zvichienzaniswa neakajairika adapta bhodhi scheme mumusika, iyo yekutarisa mutengo inogona kuchengetedzwa neinenge 50%.
Inonyanya kugadzirirwa simba idzva rekuchaja murwi, rinoona nezvekutaurirana nemagetsi emagetsi emagetsi bhatiri kuti uone iyo yese yekuchaja maitiro ekudzora
Rutsigiro rwakabatana rweyakajairwa nyika, chiyero cheEuropean uye chiyero cheJapan
Tsigira iyo nyowani yenyika yakajairwa pfuti mbiri, European standard mbiri pfuti, chiJapan standard pfuti mbiri, chinjana mbiri pfuti
Tsigira mumwe muchina une pfuti nhatu (CCS + chademo + AC)
Tsigira mumwe muchina une pfuti nhatu (CCS + CCs + GB / T)
Tsigira mumwe muchina une pfuti nhatu (CCS + chademo + GB / T)
Zvichienzaniswa neakajairika adapta bhodhi mumusika, iyo yekutarisa mutengo inogona kuchengetedzwa neinenge 50%
UBC akateedzana bidirectional V2G kuchaja murwi
Mukubvunzurudzwa, VaBai vakataura kuti kuwedzera nekukurumidza kwenhamba yemapira ekuchaja kwakaunzawo rimwe dambudziko risingakwanise kuregeredzwa. Pakazosvika 2030, huwandu hwesimba remotokari dzemagetsi muChina zvinosvika mamirioni makumi masere. Panguva iyoyo, iko kusarongeka kuwana kweiyo hombe nhamba yemapepa ekuchaja kunotungamira kune kwakanyanya mutoro shanduko, izvo zvinokonzeresa kukanganisa kukuru kune grid remagetsi. Kana pasina matanho anotorwa, matambudziko akakomba senge gidhi remagetsi kuwandisa uye kunyangwe pasina magetsi anowanikwa muna 2020
Kurongeka kuchaja yave nzira yakakosha yekudzora kana kubvisa mhedzisiro iyi. Inogona kutungamira uye kurongedza maitiro ekuchaja, kubatsira iyo gridhi yemagetsi kutema iyo yepamusoro mutoro uye kuzadza mupata, kunatsiridza mashandisirwo ehunyanzvi eiyo yekuparadzira network uye nekugona kugona kweiyo magetsi gridhi, uye kuzadzisa yekukunda-kuhwina mamiriro pakati pevashandisi uye grid. Iyo murwi wekuchaja neV2G basa chichava chakapinza chishandiso kuona zvakarongeka kuchaja uye kuburitsa kwemagetsi gridhi.
V2G bidirectional kuchaja murwi UBC 75010 nemuchena mhepo yakajeka ganda uye dhizaini dhizaini yakawanikwa mudumba reUUGreenPower. Chigadzirwa chinotora IP65 yakadzivirirwa dhizaini uye yakakwira frequency kusarudzika, ine yakafara inogara simba remagetsi voltage uye yakaderera ruzha dhizaini. Iyo gridhi yakabatana voltage inogona kuenderana neyakajairwa nyika, European muyero uye American Standard. Simba rakatemwa i7KW, inogona kuenderana nemamiriro ekumisikidza e7KW AC kuchaja murwi Inogona kutsiviwa zvakananga uye ine yakanakisa mainjiniya nyore.
"Funga nezvechiitiko ichi. Paunopaka mota yako yemagetsi munzvimbo yekupaka ine UBC bidirectional yekuchaja murwi wakaiswa mukambani masikati, uye wosimudza mota mushure mebasa husiku, uchazochaja makumi ezanu yuan muaccount yako. Kunzwa wakasununguka here? " VaBai vakadaro